XOG: Waa Kuwee Kooxaha Guulaha Ugu Badan Garoomadooda Ku Soo Gaadhay 10-Kii Sanadood Ee Ugu Danbeeyay? Koox Awood Sheegatay Ayaa Hogaaminaysa. - Gool24.Net
XOG: Waa Kuwee Kooxaha Guulaha Ugu Badan Garoomadooda Ku Soo Gaadhay 10-Kii Sanadood Ee Ugu Danbeeyay? Koox Awood Sheegatay Ayaa Hogaaminaysa.
Qiimayn lagu sameeyay garoomada kooxaha Yurub ugu waa wayn ee ay kooxaha iska lihi guulaha ugu badan ku soo gaadheen tobankii sanadood ee ugu danbeeyay ayaa la soo saaray waxaana la ogaaday garoomada ugu dhibta badnaa tobankii sanadood ee la soo dhaafay.
Garoonka Camp Nou ayaa noqday garoonka ay kooxihii soo booqday dhibaatada ugu badani ku soo gaadhay iyada oo Barcelona noqotay kooxda guulaha ugu badan u soo gaadhay garoonkeeda 10 kii sanadood ee ugu danbeeyay.
Real Madrid ayaa ah kooxda kaalinta labaad ku jirta ee tobankii sanadood ee la soo dhaafay guulaha ugu badan garoonkeeda ku soo gadhay inkasta oo ay 30 guulood ka hoosayso kooxda kaalinta kowaad ku jirta ee Barcelona oo ay si wayn u xifiltamaan.
Xogta qiimayntan ayaa laga soo bilaabay xili ciyaareedkii 2009/2010 kii iyo natiijooyinkii ay koox kasta oo guulaha ugu badan soo gaadhay ay garoonkeeda ku soo heshay guulaha ugu badan.
Barcelona waxay muddadan soo ciyaartay 298 kulan oo Camp Nou ka soo dhacay waxayna soo guulaystay 252 kulan oo ay garoonkeeda kooxuhu ku garaacday waana boqolkiiba 85% heerka guulaha Barca ee Camp Nou tobankii sanadood ee ugu danbeeyay.
Barcelona ayaa barbaro soo gashay 32 kulan waana boqolkiiba 11% halka ay soo guuldaraysatay 14 kulan oo kaliya tobankii sanadood ee ugu danbeeyay ee kulamadii Camp Nou waana boqolkiiba 4% kaliya.
Guulaha ay Barcelona tobankii sanadood ee ugu danbeeyay ku soo gaadhay Camp Nou ee ay kaalinta kowaad ugu jirto waxaa ka mid ah guushii 5-0 ka ahayd ee ay kooxdii Jose Morinho ee Real Madrid ka gaadheen, gumaadkii 7-1 ka ahaa ee Valencia, taariikhdii PSG ay ku dhigeen ee 6-1 ka ahayd iyo waliba guushii xili ciyaareedkii hore ee 5-1 ka ahayd ee Real Madrid kaga caydhiyeen Julen Lopetegui.
Markii ugu danbaysay ee ay Barcelona guuldaro kula kulantay Camp Nou kulan Champions League ahi waxay ahayd sanadkii 2013 kii markii ay Bayern Munich ceebta kala kulmeen.
Real Madrid oo kaalinta labaad qiimayntan kaga jirta ee horyaalada Yurub oo dhan ayaa soo guulaysatay 222 kulan waana in 30 guulood ka yar inta ay Barcelona kaalinta kowaad ugu jirto.
Kooxda Manchester City ayaa kaalinta saddexaad soo gashay iyada oo Etihad Stadium ku soo guulaystay 203 kulan tobankii sanadood ee guu danbeeyay halka Bayern Munich ay kaalinta afraad ugu jirto in laba guulood ka yar Man City.
Kooxda PSG ayaa shanta kaalmood ee kooxaha guulaha ugu badan garoomada ku soo gaadhay tobankii sanadood ee ugu danbeeyay buushisay iyada oo soo guulaystay 194 kulan.
Kooxaha reer London ee Arsenal iyo Chelsea ayaa min 193 kulan garoomadooda ku soo guulaystay tobankii sanadood ee ugu danbeeyay iyaga oo isku haysta kaalmaha lixaad iyo todobaad.
Atletico Madrid ayaa soo guulaystay 192 kulan oo garoonkeeda ah tobankii sanadood ee ugu danbeeyay si ay u dhamaystirto 8 kooxood ee guulaha ugu badan garoomadooda ku soo gaadhay 10 kii sano ee ugu danbeeyay.
Laakiin kooxaha Liverpool, Juventus, Man United ayaan qayb ka noqon 8 kooxood ee guulaha ugu badan ku soo gaadhay garoomadooda tobankii sanadood ee ugu danbeeyay.